SingForYou.net - Min Nae Chit Tar
Min Nae Chit Tar
Tags : BYE all friend and SFY ... we miss you all
By : MH on Apr 16, 2010
Score: 90 Rating: 5.00 Comments: 21
Min Nae Chit Tar's Description
ဒဿ --- ကျွန်တော်နဲ့ မယ်သီတာ LIVE ဆိုပြီး အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ မကြာခင် မြန်မာပြည်ပြန်တော့မယ့် ကျွန်တော်တို့ SFY ကို နှစ်ယောက်လုံး အမြဲသတိရနေပါ့မယ်။ မယ်သီတာ --- ဒီဇင်ဘာစောင့်ဘူးကွ ..စိတ်ရှည်တယ်နော်...ဇာတ်ပေါင်းပြီဗျိုးးးးးးးးးးးးးး
thuyeekg on Apr 20, 2010 0
သူများသားသမီးတွေများ မနာလိုလိုက်တာနော်။ ဇာတ်သိမ်းရင်လဲ ပြီးပါပြီ လို.စာတမ်းလေးတော့ထိုးသွားဦး...
saikyaw on Apr 18, 2010 0
ချစ်ညီ..ဘာတွေလဲ..ဘာတွေလဲ.. ဘာ ကိုနှုတ်ဆက်နေတာလဲ..သင်္ကြန် ကို ချစ်ချစ် နဲ့အတူ ရောက်လာ မယ် ဆို..ကိုယ့် ညီနဲ့ ညီ မ ကို ဘယ်ဒေါင့် ကပေါ်လာ မလဲလို့..
hazel87 on Apr 18, 2010 0
bro MH and sis Mae Thidar..., Be good ending in your real life... <not like Dat Tha and Mae Thidar story> ... See you....don't wanna say GoodBye... all* and cheers!
whitekisslay on Apr 17, 2010 0
Eall Bye twer p larr.....wayyy.....theit theit chit pe ku lo zat paung twer tar myin taw....gal pal kyay nut happy mi par te:)))).....MH bro g nelzz maltidar yay....!
turikimuriki on Apr 16, 2010 0
wow... fantastic ... so nice par both of u .... hope u two will come back2SFY and sing again ...we 'll miss you too ... Happy myanmar new year :-)
wow!!!!! perfect duets lay par sis and bro yae...... happy life lay bro and sis toe ah myae py sing ng par say shin........ :)))))))
SKB on Apr 16, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာဗျာ အားလည်းကျတယ် အခုလိုမျိုးလေးတွေ ကြားရတော့ ပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ အေးချမ်းပြီး အစင်ပြေတဲ့ ဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး ကလည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိလွန်းပါတယ်ဗျာ
yinmin on Apr 16, 2010 0
Moe-Z-lay on Apr 16, 2010 0
ဝိုး နှုတ်ဆက်ပြီလား...We will miss you too.. Great as Usual********
Rosies on Apr 16, 2010 0
arr pay par del shint 5*************
ahlwan69 on Apr 16, 2010 0
နားထောင် လို. အရမ်းကောင်း ပါ တယ်။ အား ပေး နား ဆင် သွား ပါ တယ် နော်။
အယ် ဘဘနဲ့ ချစ်..နာတောင်မသိလိုက်ရပါလားး နင်တို့ ကတယ်ခြေမြန်ပါလားး အလုပ်ရောမသွားဘူးလား ဒီမှာလာကဲနေတာ...ဟင်းးး မြင်ကတ်လာပီ..ဒင်းတို့ ၂ယောက်ကို..
lawyerlay on Apr 16, 2010 0
congreatulation par mh......happy naing par say lo su taung pay par tae.....kya naw ka dalt ..sant kyin bat phit nay pi ..haha
mal thi dar lay ne....bro MH...pyaw shwin kya par say nor....a yan nar taung lo kg tal..******** par shin..
Ilovemusic on Apr 16, 2010 0
Great...so nice...5*4both of you.
Carry on!.. nice duet! and that's good to listen too.. Happily ever after .. all*&cheers!
bro MH nae sis doz happy par zay naw....khu lo gyi note set twar tog lwan ta lo pal....yar that pan chit chin myit tar tway ma pyaung lal pal let twal twar ya par zay loh sumyar su tg pay par tal naw....
friendlylady on Apr 16, 2010 0
good tal kwar!
MaRYaunG on Apr 16, 2010 0
december hti tg wait ng woo so pal.. thu toe ka lal sate gyi tal .....zoot pal......khit khit khit..(^_^)
SCH7677009 on Apr 16, 2010 0
သိပ် သိပ် ဂျစ် နေ မိ ပြီ ဆို တဲ့ လူ တေ တော် တော် များ တာ ပဲ ။။။။ ဂျစ် ကြ ပါ တော် ဂျစ် နိုင် တဲ့ တူ တေ..... စိုင်း MH နဲ့ မယ် တီဒါ တို့ ဆက် ပြီး ဂျစ် နိုင် ကြ ပါ စေ လို နော့ :P :)))))))))))))))))))))))))) *****